Iràna: Ny Tontolo Medikaly Maharaka ny Teknolojia, Ary Ireo Fandinihan’i Norouz · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 5:04 GMT
Manolotra vaovao, mizara fomba fjery ary miady hevitra amin'ny olana isan-karazany miaraka amin'ny sarin'izy ireo, sary fandravahana ary ny asa sorany ireo Iraniana mpitoraka bilaogy. Saingy tsy izay ihany. Indraindray dia manomboka tetikasa izy ireo mba hahatsara kokoa ity tontolo ity. Ambaran'i Paris Marashi, vehivavy Iraniana-Amerikana mpitoraka blaogy amin'ny anaty lahatsary, ny fanombohana tetikasa iray izay mikendry ny hampifanakaiky ireo Iraniana matihanina amin'ny tontolon'ny fitsaboana amin'ireo mpiara-miasa aminy manerana izao tontolo izao. Ao amin'ny bilaogy Sounds Iranian [En], miresaka momba ny tetikasany, Iran Medical Research Connect, ho toy ny tranonkala ikambanana amin'ny aterineto izay hampifandray ireo mpitsabo matihanina avy any Iràna sy any an-kafa i Paris.
Ny tanjona hoy ny nosoratany, dia ny hanampy ireo mpampiofana, ireo matihanina ary ireo mpikaroka, hizara ireo lahatsorany, haharaka vaovao momba ireo tetikasa sy hetsika, ary hampifandray ireo Iraniana sy tsy Iraniana miasa amin'ny sehatry ny fitsaboana, eran'izao tontolo izao.
“Andrana fampiasa ho an'ny mpampiasa izay noforoniko izany, satria ny ankamaroan'ireo dokotera sy mpikaroka marobe fantatro amin'ny sehatry ny fitsaboana dia mara-miasa amin'i Iràna, ary liana amin'ny hisian'ny toerana iray hihaonana, hifanakalozana vaovao sy hevitra. Tiako ho hita ny fomba ahafahan'ireo fitaovana samy hafa hanamora ireo tetikasa fifanakalozana ara-kolontsaina. Afaka mamaky bebe kokoa momba ireo fandinihako ianareo isak'izay manavao azy ireo ao amin’ny tranonkalan'ny hevitro aho”.
Ny hevitr'i Paris, hanangana tetezana, dia lasa sarobidy kokoa noho ny krizy nokleary Iraniana izay mitarika ny fampitokana-monina tsy mitsaha-mitombo an'i Iràna ao anatin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena.
Mpiasa mijaly ary toekarena mihantona
Mankalaza ny Norouz – ny Taombaovao – ny Iraniana – amin'ny andro voalohan'ny lohataona. Maro ireo mpitoraka bilaogy no nanararaotra ny fiovàn'ny vanintaona mba hanaovana jeritodika ny taona lasa ary hiresahana ireo zava-tsarotra natrehana, anisan'izany ny vokatry ny krizy nokleary.
Manoratra i Kargar [Farsi] (“Mpiasa”) fa ny fetin'ny Norouz tamin'ity taona ity, toy ny tamin'ireo taona tany aloha, dia tsy mba anton-javatra hifaliana ho an'ny mpiasa. Ampian'ilay mpitoraka bilaogy fa amin'izao fotoana izao dia miaina eo ambanin'ny famoretana ratsy indrindra ataon'ny firenena kapitalista ireo mpiasa ary ny zanak'izy ireo dia miandry fatratra ireo fanomezana izay tsy takatry ny fahefa-mividin'ireo ray aman-dreny avy amin'ny kilasy antonony. Ampahatsiahivin'i Kargar amintsika ihany koa fa mpampianatra maro, izay nanao hetsika hitakiana fampiakarana karama tamin'ny volana Martsa, no mbola any am-ponja. Vinavinainy fa afaka manantena taona iray izay hahasarotra ny andavanandrom-piainany ireo mpiasa, nefa hanokatra ihany koa toko iray vaovao ao anatin'ny adin'izy ireo ho an'ny zo maha-mpiasa azy ireo.
Manoratra i Ali Mazroi [Farsi], mpanao politika reformista, mpikambana teo aloha tao amin'ny parlemanta, fa ny politika nokleary Iraniana no nahatonga ny toekaren'ny firenena ho aminà toerana tsy mivoatra.
« Raha jerentsika ny taona lasa, afaka miteny isika he tena mafy izy iny ho an'ny ankamaroan'ny Iraniana. Lazaiko hoe ny ankamaroan'ny Iraniana satria misy vitsy an'isa mila ny angovo nokleary na ohatrinona na ohatrinona sandany, ary ho azy ireo, zava-dehibe noho ny fiainana andavanandro izany. Ny ankamaroan'ireo olona ireo dia eo amin'ny fitondrana ary tsy mila mieritreritra izay hohanina isanandro. Manandrana mampiseho izy ireo fa ny Iraniana rehetra no manohana « ny angovo nokleary ho toy ny zo tsy azo esorina amintsika », ary noho io antony io, dia mamoritra izay fangatahana hafa rehetra ataon'ny Iraniana ry zareo».
Ampiany fa tsy nahavita nanatsara ny fiainana andavanandron'ny Iraniana ny governemanta, indrindra ny an'ireo izay tena sahirana. Nofaranany fa ny hany zavatra tsara tamin'ny taona lasa dia avy amin'ireo kandida tamin'ny fifidianana tao an-toerana notohanan'ny governemanta.
Milaza i Jomhour [Fa] fa mety ho taonan'ny filaminana sy ny tsy fisian'ny herisetra ho an'ny Iraniana ity taona ity. « Afaka manambara isika fa manohitra izay ady rehetra ary manandrana ny hiaina am-pirahalahiana miaraka amin'ireo firenena hafa ».
Mijaly ny natiora
Ampian'i Animal [Fa] ny fanadihadiany ny taona lasa, amin'ny filazana fa ny tontolo iainana sy ny natiora dia tsy noraharahian'ny governemanta. Araka ny filazan'io mpitoraka bilaogy io, nandritra ny fe-potoana nitondràn'i Khatami, ny tontolo iainana dia laharam-pahamehana faharoa na fahatelo ho an'ny governemanta. Amin'izao fotoana izao, nidina any amin'ny laharana fahadimy ambiny folo, eny any amin'ny faha-roapolo aza ny politikan'ny tontolo iainana, ao amin'ny fandaharam-potoanan'i Ahmadinejad. Manamafy ilay mpitoraka bilaogy fa ny fandringanana ny zaridaina sy ny ala, ny fandotoana any amin'ireo tanàna lehibe sy renirano, ary ny tsy fiheverana ireo karazana tandindonim-paharingànana, dia anisan'ireo olana lehibe indrindra momba ny tontolo iainana ao Iràna.
Ny fomba fiainana Iraniana
IIranian testament [En], bilaoginà mpanao gazety iray, mitady fanazavana amin'ny fahasambaran'ny Iraniana.
« Arahabaina ny rehetra! Fialantsasatry ny Taombaovao izao, eto Iràna. Faly ny rehetra. Ny hany olana dia tsy misy mahalala hoe nahoana no tokony ho faly izy. Hiakatra avo roa heny ny vidin'ny solika amin'ny taona ho avy, ary ireo mpahay toekarena dia maminavina taona sarotra ho an'ny Iraniana. Amin'ny lafiny iray, nanapaka hevitra ny Firenena Mikambana (tamin'ny alàlan'ny ankamaroan'ny mpifidy) ny hanamafy ny sazy atao amin'i Iràna. Nihena ny isan'ny mpizahatany noho ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ( na noho ny lazan'ny tsy fandriampahalemana) ao amin'ny faritra. Mitohy ny vaovao tsara. Nanapaka hevitra ireo mpamoaka boky ny hanao ankivy ny tsenabe iraisam-pirenen'ny boky ao Teheràna (izay atao foana isaky ny volana Mey) ho fanehoana ny mariky ny fanoherana ny politikan'i Ahmadinejad momba ny zavakanto. Ho feno korontana ara-politika, fijaliana ara-toekarena ary fahasarotana ho an'ny kolontsaina ny taona ho avy. Fa nahoana no tsy misy miraharaha izany? Izany no fomba fiainana Iraniana! Mihira mba tsy hihaino. Mihomehy mba hanafenana ny ranomaso. Mividy mba hanadino ny alahelo. Izany no fomba fanao Iraniana. Tsy maintsy miaina izany aho raha te-ho velona. “